आफ्नो डाक्टर आफै | eAdarsha.com
लाग्थ्यो रेडियो, टिभीमा बारम्बार बजिरहने सूचनाको औचित्य के होला ? सुनेपछि मनमनै भनिन्थ्यो जाबो हात धुन पनि यसले भन्नुपर्ने मेरो हात म धुन्न ल कसलाई के हुन्छ ? हुने रैछ आफैलाई असर गर्ने रहेछ । यही हात शरीरका महत्वपूर्ण अंगमध्ये १ हो । अनि यही हात तपाईं हामीलाई लाग्ने रोगको प्रमुख कारक पनि हो । थाहा भएको र पाएको धेरै पहिला हो तर अहिले आएर हो भन्ने भएको छ । त्यसैले त केही सचेतता बढेको छ । अहिले विश्वभर फैलिएको कोरोनाले तपाईं हामीलाई प्रभाव त पारेकै छ । भन्नलाई मानव स्वास्थ्यमा भनिए पनि यसले असर नपारेको क्षेत्र नै रहेन अब । कोरोनाविरुद्धको खोप आइसकेको छ । कतिले त लगाइ पनि सकेका छन् । खोपले यो महामारी नियन्त्रण गर्नेमा वैज्ञानिकहरु पनि ढुक्क छैनन् । त्यसो त मास्कले नै हमीलाई कति सुरक्षित बनाएको छ भन्नेबारेमा कुनै वैधानिक आँकडा छैन । मास्क लगाएपछि भाइरस नाकमुखमा छिर्न पाउँदैन भन्ने विश्वास छ । त्यही विश्वासले हामीले मास्क प्रयोग गर्दै आएका छौं । सेनिटाइजरको पनि अवस्था त्यही हो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रियाकै क्रममा अनियमितता भएका खबर अब हाम्रा लागि नयाँ रहेनन् । कात्रोमा समेत कमिसन खान पल्केका सरकारी र निजी क्षेत्रका जिम्मेबार अधिकारीहरुबाट हामीले धेरै आशा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले अहिलेसम्म जति गरेको छ त्यो नै धेरै हो भनेर बस्नुको विकल्प छैन । किनभने सरकारलाई जनताको भन्दा पनि सत्ताकै पीर छ । जनता चाहिने अहिले होइन चुनावका बेलामा मात्र हो । चुनावका बेलामा त कुनै न कुनै तरिकाले प्रभावमा पार्न सकिन्छ नि भन्नेमा सरकार र दलहरु विश्वस्त छन् । खोप ल्याउने कुरामा सरकारले भन्छ हामी त सम्वेदनशील नै थियौं नि निजी क्षेत्रले गर्छु भनेकाले छाडेको हो । आखिर कमिसनका मामलामा सरकारभन्दा धेरै कदम अगाडि देखियो निजी क्षेत्र पनि । सरकारी अस्पतालमा भरपर्दो सुविधा नपाइने अनि निजी अस्पतालले मौका यही भनेर ढाडै सेक्ने गरेको पनि हाम्रै मुलुकमा हो ।
दोष जसलाई जति लगाए पनि महामारीले भयंकर रुप लिइसकेको छ । यसबाट बच्ने उपाय गाली गलोज पक्कै होइन । त्यसैले आफै सचेत हुनु एकमात्र उपाय हो । नियमित हात धुने, भीडभाडमा नजाने, खानपानमा ख्याल गर्नाले हामी यसबाट जोगिन सक्छौं । फेरि दोहो¥याउँदा जाती हुन्छ कि आफ्नो हातलाई सबैभन्दा बढी अनुशासनमा राखौं । हात न हो जस्तो ठाउँमा पनि पुग्छ, जस्तो चिज पनि छुन्छ त्यसैले बारम्बार नाक कोट्याउने, आँखा मिच्ने जस्ता बानीमा सुधार ल्याउँदा पनि कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ । त्यसैले आफ्नो डाक्टर आफैं हो, सचेत बनौं ।